यस्ता छन् ताजा र हरियो सागसब्जी खानुका फाइदाहरु
नोभेम्बर 5, 2019 नोभेम्बर 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments सागसब्जी
हरियो सागसब्जी खानुका धेरै फाइदा छन् । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक भिटामिन हरियो सागसब्जीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हरियो सागसब्जीको सेवन गर्नाले पाचन तन्त्रलाई समेत बढाउन राम्रो भुमिका खेलेको हुन्छ ।
हरियो सागसब्जी नियमित सेवन गर्नाले हीट स्ट्रोक, क्यासर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जस्ता समस्यामा यसले राम्रो फाइदा पुर्याउन सक्छ । हरियो सागसब्जीमा प्रयाप्त मात्रामा प्रोटीन र खनिज भिटामिन पाइन्छ । मोटोपना र छाला चम्किलो बनाउन समेत यसले राम्रो मद्दत गरेको हुन्छ ।
१. हरियो सागमा फ्याट र क्यालोरी कम हुन्छ । यसले मोटो हुनबाट रोक्दछ । पेट सफा राख्दछ । पेटमा भएको विषादी हटाउन समेत यसले राम्रो मद्दत गर्दछ ।
२. नियमित हरियो तरकारी खानेहरूको छाला धेरै राम्रो हुन्छ । हरियो तरकारीमा एंटीऑक्सीडेंट भिटामिन ए र सि पाइने हुनाले यसले छालालाई राम्रो फाइदा गर्दछ ।
३. आजको युगमा हरियो सागसब्जी नखानुको परिणामले हाम्रो कपाल झर्ने समस्या बढी देखिएको छ । यस्तो समस्या हल गर्न समेत हरियो सागसब्जीले राम्रो भुमिका खेलेको हुन्छ । कपाल झर्ने समस्या भएकाहरूले हरियो सागसब्जी खानुस भन्ने हाम्रो राय छ ।
४. नियमित हरियो सागसब्जी खानाले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्दछ । हरियो सागमा पाइने पोटेशियमले हाम्रो शरिरमा साल्टको मात्रा बढ्न नदिने हुनाले व्लड प्रेशर बढ्नबाट रोक्दछ । वल्ड प्रेशरका रोगीले हरियो फलफूल र साग तरकारी प्रशस्त सेवन गर्नुपर्दछ ।
५. हरियो तरकारीमा भिटामिन प्रशस्त पाइन्छ । हरियो सागमा आइरन, क्यालशियम, भिटामिन ए, सि, के, ग्लाइसेमिक जस्ता थुप्रै भिटामिन पाइने हुनाले धेरै रोगहरू निको बनाउन राम्रो मद्दत गर्दछ । सुगरका रोगीले हरियो तरकारी नियमित सेवन गर्नाले सुगरको लेवल नर्मल गर्दछ ।
← यस्ता छन् भट्मास खानुका फाइदाहरु
स्वास्थ्यको लागि इमली खानुका फाइदाहरु →